JoharyJ - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Zatovo lahy teraka ny taona 1984 tao Toamasina ,zanak'i RAZANASONA Victor sy RAZAFINDRASOA Martine Izay mananjanaka Dimy (5) LAHY ka ny faralahy tamin'izany no nitoeran'ilay Talenta tia Kanto , Izy no antsoina hoe JOHARY J ka ny tena anarany dia NDRIANAMBININA Joseph.
Nifidy io anarana io ny Mpanakanto satria izany JOHARY dia zavatra natao ho mpitarika ary izy rahateo koa dia manana ilay Tonon'andron'Andriana na tonon'andro Mpanjaka ka dia izy no Mpitarika foana amin'izay zavatra atony na dia tsy manendry tena aza izy.
Efa tia mamorona hatramin'ny fahakeliny tokoa raha i JoharyJ ka isany efa nahazo ny loka teny anivon'ny sekoly nianarany (ADVENTISTE TOAMASINA BERYL ROSE, CEG RATSIMILAHO, LYCEE JACQUES RABEMANANJARA (ASCAL MOZIKA)COLLEGE FIANATRA).
Mpiangaly zava-kanto ary tena manana ny kanto maha izy azy tokoa i Johary J indrindra fa ny fanandratana ny Firenana sy ny fikajiana tanteraka ny Teny MALAGASY .
Tia mametraka mafy ny maha sarobidy an'i MADAGASIKARA izy hatramin'ny Fahazazany ary tia Vavaka koa indrindra fa hoan' ny Tanindrazana sy ireo Mahantra.
Manambady aman-janaka izy roa mianadahy ny zanany ka I Fitia sy Johary no anaran'izy ireo.
Ankatok'izao taona Folo sy roa arivo izao dia manana eritreritra hamoaka antotam-boky iray mba ho tsangam-bato mitoetra fitaratra tsara ho lovasoa hoan'ireo zandry sy ireo lina amin'izany soa toavina Malagasy izany indrindra fa hoan'ireo tia Tononkalo Malagasy.
FILOZOFIA no taranja nosafidiany teny amin'ny Ambaratonga Ambony izay isany ireo taranja tena nankafizina mafy tokoa ka mivoatra araka izany ny fandalinana ny tena Filôzôfia Malagasy izay tena mahasarotiny mafy azy raha miresaka fanaratsiana GASY fa aminy ny MALAGASY dia TSARA Avokoa ary ny ZAVA-BITA GASY dia mahaliana avokoa ka raririny loatra ho izy Raha lazaina fa tsara ny MALAGASY.
Dia izay sy izay no fantatro azo tantaraina mahakasika ity Mpanoratra Malagasy tanora ity izay tsy mikely soroka tokoa mametraka ny tena mahaGasy ny Malagasy satria hoy izy raha mba miresaka matetika"Tsy mba Gasy na oviana ianao raha tsy miteny Gasy satria ny maha Gasy anao dia ny Teny Gasy"
Nampiditra : zemjos
Daty : 22/12/2009
Mpamangy : 1986
Ho Noely tokoa
IZAHO TSY HOE POETA